म क्यानडाको पिआर छोडेर यही बसेको मान्छे हुँ – Janaubhar
म क्यानडाको पिआर छोडेर यही बसेको मान्छे हुँ
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१ | 216 Views ||
‘लव’ अधिकारी शंकर (प्रबन्ध सञ्चालक)
राप्ती अटोमोबाइल एण्ड ट्रेडिङ हाउस प्रा.लि.
के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज ?
म वास्तुशास्त्रको विद्यार्थी । यस शास्त्रले घर, व्यापारिक भवन, कार्यालय उद्योग लगायतका भौतिक निर्माण कार्यलाई वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी निर्माण गने भन्ने विषयमा ज्ञान दिन्छु ।
म त्यससँग सम्बन्धित परामर्श सेवामा बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म व्यस्त रहन्छु । १० बजेपछि म आफ्नो मुख्य व्यवसाय राप्ती अटो मोबाइलमा रहने गर्छु । व्यापार, व्यवसाय र सामाजिक कार्य यस्तैमा दैनिकी रहेको छ । बचेको समय विषयगत अध्ययन र घर परिवारमै खर्च हुन्छ ।
अनि ट्याक्टर व्यवसाय कहिले देखि शुरु गर्नुभयो नि ?
मैले यो व्यवसाय २०५६ सालदेखि गर्दै आइराखेको छु ।
तपाईको राप्ती अटोमोवाइलमा कुन—कुन कम्पनीका ट्याक्टर पाइने गरेको छ ?
यो कम्पनी, एस्कर्ट एग्रीमसिनरी भारतको आधिकारिक बिक्रेता हो । यस कम्पनीले उत्पादन गर्ने फर्मट्रेक तथा पावरटे«क ब्राण्डका ट्याक्टरहरु हामीले बिक्री गरिरहेका छौं । हामीले सिधै कम्पनीबाट आयात गर्दछौं, जसको कारणले यसको मूल्य गुणस्तरको हिसाबले मूल्य कम छ ।
यो कम्पनी भारतको सबैभन्दा पुरानो र अनुभवी कम्पनी हो । झण्डै ७० बर्ष पुरानो यो कम्पनीले १२ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सन्तुष्ट पारेको छ । कृषकको आवश्यकता अनुसार कृषि औजार जडान गर्न सकिने, बलियो, भरपर्दो र गुणस्तरीय भएकाले बजारमा यसको माग र बिक्री पनि बढी नै छ ।
जिल्लामा ट्याक्टरको व्यापार कस्तो छ त ?
राप्तीमा बार्षिक २ सयदेखि २ सय ५० सम्म ट्याक्टर बिक्री हुने गर्छन् । यो व्यवसाय हालसम्म पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा परेको छ ।
यस व्यवसायका चुनौती थुपै्र छन् । जस्तै वित्तीय क्षेत्रमा बैंकले कृषकहरुलाई लगानी गर्न नचाहने, लगानी गर्नु परे बिक्रेतालाई वाइब्याक ग्यारेण्टी राखेर मात्र लगानी गर्ने, वित्तिय संस्थाले गर्ने ४० देखि ५० प्रतिशत लगानीबाहेक अन्य रकम बिक्रेताले लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने चुनौती यो व्यवसायमा छ ।
आजभोलि पुराना ट्याक्टरसँग नयाँ ट्याक्टर साट्ने लहर नै चलेको छ । कुन कम्पनीले कति बढी मूल्य लगाउने भन्ने होड नै चलेको छ । यसले ग्राहकलाई त फाइदा पुगेको छ तर व्यवसायीलाई भने मारमा पारिरहेको छ ।
दाङ कृषि व्यवसायका लागि पकेट क्षेत्र मानिदै आएको छ, यसको विकासका लागि कृषकले लैजाने ट्रयाक्टरहरु तपाईहरुले कसरी उपलब्ध गराउनु हुन्छ ?
कृषि उद्योगमा हुन लागेको सकारात्मक परिवर्तन उत्साहजनक छ र यसले ट्याक्टर र कृषि औजारको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । हामीले हाम्रा ग्राहक वर्ग अथवा हाम्रो क्षेत्रका कृषकलाई विभिन्न प्रकारले सेवा प्रदान गरिरहेका छौं ।
ट्याक्टर मात्र नभई हामीले ग्राहकको माग अनुसार विभिन्न कृषि, औजारहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छांै । कार्य अनुसारका अत्याधुनिक औजारको उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनु, प्रयोग विधिको बारेमा जानकारी गराउनु, वित्तिय कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजी एवं विक्तिय संस्थाको खोजी गर्नुदेखि वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गरी नपुग भएको लगानीमा हामीले सक्दो सहयोग गर्ने र बिक्रीपश्चात् दिइने सेवामा ग्राहकको घरमै गएर ट्याक्टर लगायत कृषिऔजारहरु मर्मत सम्भार गर्नेजस्ता कार्य हामीले निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौं ।
हाम्रो सफलता भनेको ग्राहक वर्गको सन्तुष्टिमा निर्भर गर्दछ भन्ने बिषयमा हामी सचेत छौं ।
ग्राहकलाई हेरेर व्यापारीले सामानको मोलमोलाई गर्छन् भनिन्छ नि, खास कुरा के हो ?
यो कुरा गलत हो भन्न सकिदैन । किनकि व्यवसायीको सोचमा, त्यस व्यवसायीको पृष्ठभूमि, अनुभव र आचरणमा भर पर्ने कुरा हो । हामी यस विषयमा गम्भीर छांै । किनभने त्यसप्रकारको सोच भएका व्यवसायीहरुको कारण सम्पूर्ण व्यवसायीलाई ग्राहकले हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यस व्यवसायलाई दिर्घकालीन रुपमा टिकाइराख्न र देशमा हुनैपर्ने कृषि क्रान्तिलाई सफल पार्न यसप्रकारको व्यावसायिक आचरण छोड्नुपर्दछ ।
व्यवसायमा मात्रै हो कि अन्य सामाजिक काममा पनि समय खर्चिनुहुन्छ ?
समाजमा आइपर्ने बाढी पहिरो, आगलागी रक्तदान लगायतका बिषयमा मैले सहयोग गरिरहेको छु । चाहे त्यो व्यक्तिगत रुपमा होस्, चाहे त्यो संस्थागत रुपमा ।
म लायन्स क्लब इन्टरनेशनल, घोराही सिटीको सचिवको रुपमा पनि सक्रियरुपमा सामाजिक कार्यमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । त्यो संस्था नेपालकै सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने संस्था हो ।
त्यसैगरी म नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आजीवन सदस्य पनि हुँ । हामीले स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन गर्न सकिने र स्थानीय स्तरको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक संस्थाको शुभारम्भ गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
दैनिक रुपमा विदेशीने युवाहरुका लागि यहाँ जस्तो व्यवसायीले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
स्वदेशमा पनि अवसरहरु छन् । विदेशीहरुले नेपालमा अवसर खोजिरहेको अवस्थामा हामी अझ बढी सचेत हुन जरुरी छ । रोजगारी भन्ने विषय सिर्जना गर्ने विषय हो । यसको प्रगति अथवा दुर्गति हामीमै निर्भर गर्छ ।
रचनात्मक र सृजनात्मक कार्य गरेर देश विकासमा सहभागी हुन जरुरी छ । म पनि क्यानडाको लागि पिआरको अवसर छाडेर नेपालमै केही गर्ने प्रण गरेर यही काम गरिरहेको छु । म सम्पूर्ण युवा वर्गलाई नेपालमै केही गर्न आह्वान गर्छु ।
Prevमहिलालाई नआएको लोकतन्त्र
Nextपहिलोपल्ट जहाजमा | दीपक घिमिरे